Ogaden News Agency (ONA) – Maraykanka oo Ciidamadiisa Afqanistan Kala Baxaya.
Maraykanka oo Ciidamadiisa Afqanistan Kala Baxaya.
Posted by Dayr	/ December 22, 2018
Dawladda Mareykanka ayaa qorsheyneysa in kumanaan ciidan ah oo ka joogo dalka Afqanistaan ay kala soo baxdo halkaasi, sida ay ku warrantay warbaahinta Mareykanka.
Warbixinta lasoo saaray ayaa soo xigatay saraakiil aanan magacooda la sheegin, kuwaas oo sheegay in 7000 oo ah kala badh ciidammada Mareykanka ee hadda ku sugan Afqanistaan laga soo saari doono muddo bilooyin gudahood ah.
Arrintan ayaa imaneysa maalin kaddib markii Trump uu shaaca ka qaaday in ciidamadiisa ka joogo Suuriya uu kasoo saari doono. Xoghayaha gaashaandhigga Mareykanka Jim Mattis ayaa shaaca ka qaaday in arrintan darteed uu isku casilay. Ciidammada Mareykanka ayaa ku sugan dalka Afqanistaan tan iyo sannadkii 2011-dii kaddib markii uu dhacay weerarkii 11-kii September.
Wakhtigaas, Ururka Taalibaan oo ka arriminayay Afqanistaan waxay diideen inay usoo gacan geliyaan Usaama Bin Laden oo isagu sheegtay mas’uuliyadda weerarkaasi, madaxweynihii Mareykanka xilligaasi, George W Bush wuxuu bilaabay howlgal militari oo ku baadigobayo Usaama iyo inuu afgembiyo Taalibaan.